Microsoft-LinkedIn nahazo fananana varavarana vaovao ho an'ny olona
Microsoft LinkedIn Akira ny mamokatra varavarana vaovao ho an'ny olona
Ny fahazoana mividy Microsoft LinkedIn nohodinoin'ireo mpanara-maso, fanokafana entana vaovao ho an'ny olona manerana izao tontolo izao
Efa ho enim-bolana teo ho eo talohan'ity, tamin'ny 13 June, dia nanambara izy ireo fa hahazo an'i LinkedIn i Microsoft. Tamin'izany fotoana izany, nilaza izy ireo fa mikasa ny hametraka ny fifampiraharahana alohan'ny taona. Androany, nanambara ny Kaomisiona Eoropeana fa navotsotra ny fiarovana. Noho izany, efa nahazo ny ankamaroan'ny fampiandraiketana ara-panjakana izy ireo fa tokony hamita ny fahazoam-bokatra, ary hifarana ny fandaharana amin'ny andro ho avy.
Ny fanekem-pinoana any Bruxelles dia manatanteraka fanamarinana sy fanamafisam-peo mifandraika any Etazonia, Afrika Atsimo, Kanada, Brezila ary Afrika Atsimo. Ao amin'ny firenena tsirairay sy ny maro hafa, izy ireo dia nanana fahafahana nanadihady ny fifangaroana tamin'ny manampahefana sy ny mpitantana ny governemanta tamin'ny antsipiriany.
Amin'ny maha-singan'ny fanadinana azy ireo amin'ny Kaomisiona Eoropeana, dia nanangana andraikitra sasantsasany izy ireo mikasika ny fanohanan'ny Microsoft ho an'ireo manam-pahefana tsy miankina amin'ny fanjakana. Ohatra, nomeny izany nandritra ny dimy taona manaraka:
Mbola hanokatra ny programa Add-in ao amin'ny Office izy ireo ho an'ny sampandraharahan'ny fifandraisana an-tsokosoko ivelany. Ny programa Add-in ao amin'ny Office dia manome hery ireo mpahaikitra mba handrindra ny fitantanana azy ireo ho Microsoft Outlook, Word, PowerPoint ary Excel, hanomezana mpanjifa fampiasa amin'ny ordinatera. Raha mbola manohy manatsara io fandaharana io izy ireo, dia ho afaka hanatona ireo manam-pahaizana manokana momba ny fifandraisana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena.
Hanohy ny fametrahana fotoana voafetra izy ireo ao amin'ny Birao Office izay ahafahana manara-maso ny sehatra iraisam-pirenen'ny fifandraisana manerantany.
Hanome toky izy ireo fa ny tompon'andraikitra IT sy ny mpanjifa dia afaka mampifanaraka ny fihaonan'ny Birao amin'ny alalan'ny fanangonana raha hampiseho amin'ny UI ny profil ny LinkedIn sy ny antontan-kevitra momba ny hetsika izay azo arindra any aoriana.
Amin'ny fotoana tsy ahafahany manangana fampiharana LinkedIn na solosaina ho an'ny Windows PCs ary hampiditra izany ao Windows, dia avelan'izy ireo ny mpamokatra PC haka ny tsy hampidirana azy ireo eo amin'ny PC Windows ao amin'ny faritra ara-toekarena Eoropeana, na EEA. Ankoatr'izay, manome toky izy ireo fa afaka manala ny fampiharana ny mpanjifany ary mety hitranga amin'ny vintana izay tiany. Ankoatr'izay dia tsy hampiasa Windows mba hitarika ny mpanjifa hampidirina fampiharana LinkedIn, na dia mety hijanona ao amin'ny Windows Store aza izy ary hampivoatra amin'ny fomba samihafa.
Ao amin'ny EEA dia tsy hifanaraka amin'ireo mpamokatra PC izy ireo amin'ny fametrahana fampiharana Windows LinkedIn na tapa-kevitra izay hanohana ny LinkedIn amin'ny sehatra elitika ary ao anatin'ireny andalana ireny dia manaparitaka ny fifehezan'ny olona manam-pahalalana amin'ny fitantanana ny serasera.
Izy ireo dia nanam-bintana ny fahafahana hiresaka amin'ireto singa sy singa samihafa samihafa ireto ao anaty làlana iray manan-tsaina sy mahomby amin'ny Kaomisiona Eoropeana.
Amin'ny alàlan'ny fomba fitantanan-draharaha ao ambadik'ity, dia afaka mampiray ireo fikambanana mahafinaritra roa izy ireo ary mifantoka amin'ny olana goavana kokoa momba ny zavatra ho avy. Ny fisehoan-javatra tamin'ireo enim-bolana teo aloha dia tsy vitan'ny hoe tombontsoa ara-barotra fotsiny, fa ny olana goavana eo amin'ny fiarahamonina mifandray amin'izy ireo, izay tena ilaina.
Tamin'ny volana Jona, nitatitra ny fahitan'izy ireo i Satya Nadella sy Jeff weiner, CEOs an'ny Microsoft sy LinkedIn, mba hampitambatra ny rahona mitondra fahombiazan'izao tontolo izao miaraka amin'ny rafi-panofanana mitondra fiara manerantany. Andro folo andro taorian'ny nanambaran'izy ireo an'ity fifangaro ity, nifidy ny handao ny Vondrona Eoropeana ny mpifidy any Royaume-Uni. Ankoatra izany, dimy volana taorian'izay, nisy fitokonan'ny fiaramanidin'ny fifidianana filoham-pirenena tany Etazonia. Eo amin'ny andaniny roa amin'ny Atlantika, dia hita fa miharihary tsikelikely fa olona maro no mianatra momba ny havia ary tsy afaka mandray anjara amin'ny fampandrosoana ara-bola sy fisokafan'ny toekarena misongadina.
Raha toa ny fitaovana fanavaozana dia tsy panacea ho an'ny olana ara-bola misy ankehitriny, matoky izy ireo fa afaka manao fanoloran-tena tsy mety. Ny Microsoft sy ny LinkedIn dia manana fahafahana bebe kokoa ho an'ny olona tsirairay ety anaty aterineto mba hamoronana sy hahazoana fahazoan-dàlana ho an'ny fahaiza-manao vaovao, manaiky ary mikatsaka asa vaovao, ary hampivoatra ny fanavaozana sy ny mahasoa kokoa rehefa miara-miasa amin'ireo mpiara-miasa aminy. Miara-miasa izy ireo ka afaka manatontosa bebe kokoa ny fanompoan'ireo izay manana fampianarana ambony, ary koa ireo olona maro mikatsaka fihaonana vaovao, fahaiza-manao sy fahaizana mifanaraka amin'ny fanomanana matihanina antsoina toy ny foibe. Ny tanjon'izy ireo dia ny manao ny anjarany hanokatra varavarana misokatra kokoa ho an'ny olona tsy nandray anjara tamin'ny fampandrosoana monisipaly.
Miaraka amin'ny fifangaroana amin'i Microsoft sy LinkedIn, afaka mahita fomba iray ahafahan'ny olona mianatra ny fahaiza-manao izy ireo ary mitady asa bebe kokoa. Amin'ny alalàn'ny Microsoft Philanthropies, dia handray anjara bebe kokoa amin'ny fandaminana hafa izy ireo hampitombo ny fahaiza-manao ho an'ny sekoly. Amin'ny alàlan'ny hetsika Access Affordable Affordable sy ny fifandraisana vaovao "Broad White Televisions Broadband", dia hampita ny fidirana an-tserasera amin'ny vondrom-piarahamonina mafana kokoa izy ireo. Ankoatr'izay, miaraka amin'ny tatitra LinkedIn Economic Graph, miaraka amin'ny fampahalalana momba ny fampandrosoana sy ny fahaiza-manao ilaina eo an-toerana, misy ny fahafahana lehibe hanampy ny governemanta hampiasa fampahalalana tsara sy fahaiza-manao lojika hikatsaka ny rafitra fandrosoana ara-bola mba hampifandray olona amin'ny varavarana misokatra vaovao.
Tsikaritr'izy ireo avy hatrany fa tsy misy fikambanana tokana afaka hibanjina ny fahatakarana ireo fahasahiranana ara-bola maro manjaka amin'izao tontolo izao ankehitriny. Angamba mihoatra noho ny zavatra hafa rehetra, ny governemanta dia tokony hanohy ny fanavaozana ny ankamaroan'ny fampianarana, manomana sy ny fomba fiasa. Ankoatra izany, eo amin'ny ampahany tsy miankina sy misokatra, dia tokony hihaona izy ireo ary hiasa amin'ny fahatsapana andraikitra iraisana.
Tsy misy ny tsy fahampian'ny asa - na ny fahafahana - eo anoloantsika.
Rehefa nifarana ny resaka nifanaovan'ny governemanta manerana izao tontolo izao momba ny fahafahana hampiray an'i Microsoft sy LinkedIn, dia maniry ny hanomboka sy hifantoka amin'ny fanaovana ny anjarany izy ireo.
Ny Microsoft Corporation dia manambara ny fanohanan'ny cloud vaovao ny vavahadin'i Azure